'बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने आधार नै बनाइएको छैन' | नेपाली पब्लिक 'बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने आधार नै बनाइएको छैन' | नेपाली पब्लिक
साेमबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु… इलेक्ट्रिक कार चार्ज गर्न सकिने पावर… होसीयारः यौनजीवनसँग आबद्ध महिलामा हुनसक्छ, पाठेघरको… विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट रंगशालाको उद्घाटन… प्रदेशस्तरमा फर्म दर्ता विधेयकमा छलफल तेन्दुलकरलाई ‘लउरेस स्पोर्टिङ मोमेन्ट’ अवार्डबाट सम्मानित चौथो इन्द्रदह पर्यटन उत्सव चन्द्रागिरि नगरपालिकामा…
होमपेज / अन्तरवार्ता | अर्थ | कर्पोरेट | वित्त |
‘बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने आधार नै बनाइएको छैन’
नेपाली पब्लिक २०७६, १६ जेष्ठ बिहीबार १८:१८
प्रा.डा. पिताम्बर शर्मा नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रा.डा. शर्मासँग नेपाली पब्लिकले संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा के कस्ता विषयहरु छुटे र के गर्न सकिन्थ्यो? भन्ने विषयमा छोटो वार्ता गरेको थियो। प्रस्तुत छ वार्ताको सारः
समग्रमा बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
– बजेट आएपछि जनतालाई प्रभाव पार्ने भनेको राजस्वका दरले मात्रै हो। त्यो कुरा यो बजेटमा छैन। बजेट जनतालाई पिर पार्ने खालको छैन, राम्रै बजेट हो। सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च हो। तर, त्यसको प्रत्याभूति भने यो बजेटबाट हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्चको दृष्टिकोणले हाम्रो अनुहार त्यति राम्रो देखिएन। चालू आर्थिक वर्षमा पनि ४३–४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले जति महत्त्वाकांक्षी कुरा गरेको भए पनि व्यवहारमा त आखिर केही पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने आधार अर्थमन्त्रीले दिन सकेका छैनन्। पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले कस्तो उपाय अपनाउँछ, कर्मचारीले यसका लागि के–के गर्छन्? यससम्बन्धमा बजेटमा समेटिएन। स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही बजेट खर्च गर्न सकेमा त्यसबाट केन्द्रीय कोषको पनि खर्च बढेको देखिएला। तर, यसबाट पुँजीगत खर्च बढ्ने आधार मैले त केही पनि देखेको छैन।
त्यसो भए यो बजेटले पनि चालू आर्थिक वर्षकै नियति भोग्नुपर्नेछ त?
– अहिलेसम्म त मलाई यस्तै लागिरहेछ। बजेटको पुँजीगत खर्चको कुनै आधार नै बनाइएन।
बजेटले उत्पादनको क्षेत्रलाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सकेको छ त?
– उत्पादनमा प्रभाव पार्ने कुरा दुई–चारवटा छन्। जसमा मलखाद, बीउ र सिँचाइ पर्छन्। मुख्य रूपले प्रभाव पार्ने सिँचाइ हो। सिँचाइ भनेको रातारात हुने कुरा हैन। उत्पादनसम्बन्धी एउटा पाटो कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यति राम्ररी सोचिएको जस्तो मलाई लागेन। यद्यपि, अग्र्यानिक कृषिलाई निकै प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपालको कृषिमा त्यो ‘गेम चेन्जर’ हुनसक्छ। त्यसका लागि सरकारदेखि तल्लो तहसँग संस्थागत आधार चाहिन्छ। ती आधारहरू अहिलेसम्म बनाउन सकिएकै छैन।
वर्तमान सरकारको दर्शन र आस्थाको रुझानका आधारमा यो बजेटलाई कत्तिको सकारात्मक मान्नुहुन्छ?
– बजेटलाई नकारात्मक नै भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर, सरकारको रुझान नै के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। भूमिसुधारका कुरा, पर्ती जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरा, त्यसमा गर्नुपर्ने संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा, भूमि वितरणको कुरा लगायतका कुनै खास प्रकारको परिवर्तन मैले देखेको छैन। केही दिन अघि मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक माग गर्दै चिया मजदूरले एक महिना आन्दोलन गरे, हडताल गरे। न्यूनतम पारिश्रमिक त सरकारको नीतिमै छ। त्यसलाई त सरकारले नै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो। तर, मजदूरले लामो आन्दोलन गरेपछि मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कुरा आयो। त्यसैले कुनै पनि विषयमा सरकारको नीति भएर मात्रै पनि नहुने रहेछ। त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नियत पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा यस घटनाले पृष्टि गरेको छ। त्यसैले यो बजेटमा सरकारको दार्शनिक र आस्थाको रुझान कतै पनि देखिँदैन।
बजेटले निजी क्षेत्रको विकासका लागि केही गरिदिएको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
– कर बढ्ला भनेर निजी क्षेत्र डराइरहेको थियो। तर, निजी क्षेत्रका लागि करको दरमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन। बाहिरबाट आयात हुने वस्तुमा कर बढाइएको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसबाट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने अवस्था बनेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र खुशी भएको हो। राम्रै छ यो कुरो।
बजेटलाई प्रतिपक्षी लगायतले पूरै वितरणमुखी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनिरहेका छन्, यस बजेटका नकरात्मक पक्ष चाहिँ के छन्?
– प्रतिपक्षले बजेट राम्रो भएन भन्नु त स्वाभाविकै हो। बजेटको नकारात्मक पक्षको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा कुल बजेटको २०–२२ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्थ्यो। एक–दुईवटा कामबाहेक उत्साहित हुनुपर्ने म त यसमा खासै देख्दिनँ। अर्को कुरा प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ विकासका निम्ति दिने भनिएको छ, त्यो वाहियात कुरा हो। स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि ऐन कानून, नीति र नियम बनाउन चुनिएर आएका सांसदलाई विकास गर भनेर बजेट दिनुपर्ने कामै छैन। सांसदलाई बाँडेको यो अर्बौंको रकम अनुत्पादक रूपमा खर्च हुन्छ। म त यो नीतिको पहिल्यै विरोधी हुँ। यस्तो वाहियात खर्चलाई त बन्द नै गर्नुपर्छ।
अहिलेको बजेट केन्द्रीकृत राज्यसत्ता सञ्चालनको मानसिकताबाट आएको जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई?
– हो, यो बजेट केन्द्रीय मानसिकताबाटै, केन्द्रीकृत राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नियतबाट आएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। यो बजेट मात्रै हैन, यस सरकारका नीतिहरू, भर्खरै प्रस्तुत सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न समयमा सरकारप्रमुखले दिएका अभिव्यक्तिहरू सबैलाई हेर्दा सरकार केन्द्रीकृत व्यवस्था चाहन्छ र यही चाहनाअन्तर्गत उसले काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई भान हुन्छ। त्यसैले संघीयतालाई बलियो पार्ने बजेट चाहिँ आएको छैन। यस्तै परिपाटी हो र जारी रहने हो भने संघीयता बलियो हुँदै जानुको साटो कमजोर हुँदै जान्छ।
प्रा. डा. पिताम्बर शर्मा
समृद्धि र सुशासन कायम गर्न…
फिल्म ‘८३’ बाट रणवीर र…
रातो कलरकाे टाटा नेक्सनको खरिदमा…
बबरमहल बमकाण्डका दोषी जेल मुक्त
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग…
निर्वाचन शान्तिपूर्ण मात्रै होइन, जनमत…
साेमबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु भयाे कि?
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार २०:१८
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार १८:१४
चौथो इन्द्रदह पर्यटन उत्सव चन्द्रागिरि नगरपालिकामा हुने
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार १४:५२
टेलिकमको आकर्षक अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइस प्याक, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार १५:०५
वैदेशिक सहयोगमा निर्माण भएका सडकमा समस्या
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार २०:४६
शिवकर्थिकेनकाे फिल्म ‘डाक्टर’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार १७:३०
२०७६, ५ फाल्गुन सोमबार १७:२५